जब जनकपुर जान विमान चढेका यात्रु पोखरा पुगे… - Kohalpur Trends
जब जनकपुर जान विमान चढेका यात्रु पोखरा पुगे…
३ पुस, काठमाडौं । शुक्रबार अपरान्ह करिब ४ बजे पोखरा विमानस्थलमा बुद्ध एयरको एटीआर ७२ जहाज अवतरण गर्‍यो । त्यसपछि विमानमा सवार यात्रु तीनछक परे, उनीहरू काठमाडौंबाट जनकपुर जान भनेर विमान चढेका थिए । आफू चढेको जहाज पोखरा अवतरण भएको थाहा पाएपछि उनीहरू अलमलमा परे । आखिर के भयो ? किन भयो ?
Previous Previous post: १० महिनापछि मस्जिद खुलेको दिन
Next Next post: आन्दोलन रोक्न सरकारले गरेको आग्रह उखु किसानद्वारा अस्वीकार